Bangani abathandekayo, kusayithi lethu Izikhathi zaseJalimane Silungiselele leli khasi ukuze siqoqe izifundo ezihlobene nawe futhi sizibone ngokuhlanganyela ekhasini.
Ngezansi kunohlu lwezifundo esizilungiselele ngezikhathi zamaJalimane kuwebhusayithi yethu. Mayelana nezikhathi zamaJalimane, siqale sabona ukwakheka kwemisho yaseJalimane kanye nezifundo zokwakhiwa kwemisho yaseJalimane okufanele wonke umuntu azi ngaphambi kokuthi singene endabeni yezikhathi, ngakho-ke sibeke izifundo zokwakha imisho yaseJalimane ekuqaleni kohlu lwethu ngezansi njengolwazi lokuqala.
Ngemuva kwemisho yaseJalimane yokwenza izifundo, njengesikhathi samanje saseJalimane, inkathi yamanje yaseJalimane, inkathi edlule nolimi lwesiJalimane, njengePrateritum nePerfekt, nesikhathi esidlule nesiJalimane Izikhathi zaseJalimane Ungabona izifundo.
AMAMAKHONO AMAHLELO AMANYE NEMIKHONO ESIKHULU
ISIKHATHI ESIPHELELE EGerman
UKUHLOLWA KWESIKHATHI ESIKHATHI
ISIKHULU ESIKHULU ESIKHULU (SAMPLE PHRASES)
NAME SITES ENGERMAN
IZINDABA EZIKHULU EGERMAN
I-GEMS E-MULTIPLE ENGERMAN
I-PRATERITUM EGULANI - IQHAWE EGAMENI
PERFECT - DIED IN THE GERMAN PAST
I-PLUSQUAMPERFECT EGULANI - ISIKHATHI ESIPHELELEYO
Bangani abathandekayo, futhi ungavakashela izinkundla zethu ukuthola izihloko ezingaphezu kwalezi ezingenhla futhi wabelane ngolwazi ngezihloko.
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe ezinyangeni eziyi-11 ezedlule, ngoJanuwari 23, 2021, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngoJanuwari 24, 2021.